I-Villa Cocuyo Micro Villa ene-Blue Mountain Vista - I-Airbnb
I-Villa Cocuyo Micro Villa ene-Blue Mountain Vista
Providenciales , Caicos Islands, i-Turks ne-Caicos Islands
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Jeffrey
Ngokuvamile i-Villa ayilokothi iphindwe, Yakhiwe yi-Ceriocia Pratt yendawo, le ndlu enomusa we-Villa inqotshwe e-Blue Mountain etholakala endlini ehlelwe kahle. Ijabulela ukubukwa okumangalisayo kwe-North Shore, etholakala emphakathini wangasese futhi ophephile eduze nezitolo zokuthenga, izindawo zokudlela kanye nebhishi. Jabulela ubusuku obuthulile ekhaya noma uhambe uye "okungcono kakhulu!" Indawo yokudlela yase-Jamaica esiqhingini.
Faka isicelo kuNgosi Oqinisekisiwe wokugunyazwa kokuhamba.
I-villa yangasese evulekile yesimanje evulekile eneminyango emikhulu eshelelayo esebenzisa ngokugcwele imimoya yethu yohwebo eyingqayizivele. Lesi sikhala sihlanganisa ikhishi lesimanje elihlome ngokuphelele futhi eligcwele labo abajabulela ukulungiselela ukudla ekhaya.
Ngiyaziqhenya ngokuqinisekisa ukuthi le villa ayinabala futhi ngizolandela yonke imihlahlandlela yokubulala amagciwane kanye nokuhlanzwa kwezindawo zonke njengokusho kwemihlahlandlela ye-Covid-19.
Indlu yokugezela ineshawa yemvula yekhwalithi ye-spa, i-shampoo, i-conditioner nokugeza umzimba. I-villa iphinde ibe neshawa yangasese yangaphandle yalezo zinsuku ngemuva kolwandle. Indawo yangaphakathi ihlanganisa igumbi lokulala elizimele elinezicabha zengilazi ezishelelayo kanye neminyango yesikrini esishelelayo, izinto eziklanywe ngokwezifiso ezakhiwe ngokwezifiso kanye nokuqedwa. Uhlangothi lwephuli uzothola ichibi elishisayo, umbhede wosuku wangokwezifiso omkhulu owakhelwe ngaphakathi walezo zinsuku zantambama ezinobuvila. Kukhona nezihlalo zokuphumula ze-pool side chaise kanye nezikhwama zikabhontshisi ezithokomele zangaphandle ongahlala kuzo. Idekhi ifaka isethi yokudlela ukuze ujabulele ukudla kwakho noma isitayela se-alfresco sekhofi. Kunenqwaba yesikhala sekhabethe ekamelweni. Kukhona indawo yokudlela yasekuseni kanye nendawo yokuphumula enosayizi omuhle enosofa olukhulu ne-ottoman. Jabulela ukulalela umculo nge-Bluetooth stereo nokubuka amamuvi nge-tv yesikrini esikhulu. I-villa ihlanganisa umgwaqo omkhulu wangasese wemoto yakho eqashisayo. Ifriji ihlale igcwele ijusi, amanzi kanye nesoda ukuze uhlale.
I-Villa Cocuyo isemphakathini wangasese we-Seascape. Lo mphakathi uthule kakhulu futhi ujabulela ubusuku obunokuthula. Le ndawo ye-Blue Mountain isendaweni ephakathi eduze nawo wonke amasevisi. Amabhishi amaningi aqhele ngemizuzu engu-5 kuya kwengu-10. I-Villa Cocuyo ibheke empumalanga ijabulela ama-sunris amahle kanye nombono omuhle wogu olusenyakatho olubheke empumalanga kuya e-Gracebay beach. Ibhishi eliseduze kakhulu e-Gracebay yi-Bight Park Beach. Yimizuzu engu-4 nemizuzwana engu-45 ngemoto... Ngiyichithe ngesikhathi:)
Ngizotholakala ukuze ngisize nganoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame noma uma nje udinga iseluleko sokuthi ungahlola kuphi